Miakatrakatra ny tosidrà ao Karabakh satria mifampiampanga ny andaniny sy ny ankilany · Global Voices teny Malagasy
Rosia miampanga fanindroany an'i Azerbaijàna ho tsy manaja fampitsaharana poabasy
Voadika ny 04 Avrily 2022 17:14 GMT
Vakio amin'ny teny Português, Ελληνικά, Español, English
Sary an'i Антон Дмитриев ao amin'ny Unsplash
Volana iray henjana iny lasa teo iny ho an'ny faritra ifandroritana ao Karabakh, faritra manana habe 4.400 km² ao Kaokazy Atsimo, taorian'ny fiampangàna hoe nanitsakitsaka ny fampitsaharana poabasy i Azerbaidjàna, ka namelona indray ny disadisa nanomboka tamin'ny fiandohan'ny Martsa. Ny sasany amin'ireo mpandinika dia manondro ilay fihenjanana vaovao ao Karabakh ho toy ny fihitaran'ilay ady ao Okraina.
Tamin'ny 2020, nifandona nandritra ny 44 andro i Armenia sy Azerbaijana tao Karabakh. Faritra teo ambany fifehezan'ireo vondrom-bahoaka Armeniana tao aminy hatrizay ilay faritra, toy ny hoe fanjakana nanambara samirery ny fahaleovantenany hatramin'ny ady iray tany amin'ny fiandohan'ny taona 90s tany, izay niafara tamin'ny fampitsaharana poabasy tamin'ny 1994 sy ny fandresen'ny tafika armeniàna. Ny ampitson'ilay ady voalohany, niforona ho azy ny Repoblika Nagorno-Karabakh, izay tsy nahazo ny fankatoavana iraisampirenena. Faritra fito mifanila aminy no nipetrahan'ireo miaramila armeniàna. Vokatr'izay ady izay, “maherin'ny iray tapitrisa ny olona voatery nandao ny tranony: nandositra an'i Armenia ireo Azerbaijanis, Nagorno-Karabakh, ary ireo faritra mifanila aminy, raha ireo Armeniàna indray nandao ny tranony tany Azerbaijàna,” araka ny voalazan'ny International Crisis Group, fikambanana iray tsy miankina amin'ny fanjakàna ary miasa misoroka ny ady sy mandrafitra ny pôlitika.
Taorian'ilay ady faharoa tao Karabakh tamin'ny 2020, niverina azon'i Azerbaijana indray ny fifehezana ny maro tamin'ireo toerana fito voabodo teo aloha. Vokatr'io ady faharoa io, azon'i Azerbaijana ihany koa ny iray ampahatelon'i Karabakh.
Ny 10 Nov 2020, teo ambany fiahian'i Rosia dia nosoniavin'i Armenia sy Azerbaijana ny fifanarahana iray ho fampitsaharana poabasy. Tanatin'ireo teboka maro tamin'ilay fifanarahana, neken'i Armenia sy Azerbaijana ny hisian'ireo Rosiàna mpampandry tany miisa 1.960 tany amin'ireo faritra tao Karabakh “tsy nobabon'i Azerbaijana ary lalantsara tery iray mampitohy amin'i Armenia mamakivaky ny distrika azerbaijaney ao Lachin.” Misy 27 ireo toby rosiàna mpampandry tany ao Azerbaijàna.
Hatramin'ilay fifanarahana vita sonia tamin'ny Novambra 2020, betsaka ireo tatitra milaza fanitsakitsahana fampitsaharana poabasy, ka mifampiampanga ho vanja nandrehitra ny afo ny andaniny sy ny ankilany. Saingy ny firosoan'ny tafika azerbaijaney hatramin'y Febroary sy ny fambaboany ilay vohitra stratejika ao Farrukh, ao atsinanan'i Karabakh, arovan'ireo Rosiana mpampandry tany, tamin'ny 25 Martsa 2022, no nitarika ho amin'ireo fiampangana an'i Azerbaijàna ho nanitsakitsaka ny fampitsaharana poabasy nataon'ireo manampahefana avy ao Erevan sy Maosko.
Raha kely indrindra dia dimiambinifolo ireo miaramila armeniàna naratra ary telo no maty hatramin'ny 24 Martsa, araka ny tatitry ny rantsan'ny BBC ao Azerbaijàna, raha nitanisa ny vaovao navoakan'ny tafi-piarovan'i Karabakh. Nolazain'ilay tafi-piarovana ihany koa fa nisy ny naratra tamin'ny lafy azerbaijaney, izay nolavin‘ny minisiteran'ny fiarovana ao Azerbaijàna. Nandritra izany fotoana izany, tao anaty fanambaràna iray nivoaka tamin'ny 25 Martsa, nilaza ny Ministeran'ny Raharaha Ivelany ao Azerbaijàna fa tsy nisy nilàna kotaba rehefa niresaka ireo fihenjanana mitombo eny amin'ireo tsipika nifanantrehana, ary i Azerbaijàna nanazava “ireo toerana sy toby [misy ny tafiny mitam-piadiana] eny an-kianja.”
Tany am-piandohan'ity volana ity, “nampangain'ireo manampahefana de facto ao Nagorno-Karabakh i Azerbaijàna ho nanapaka fanindroany indray ny famatsiana entona voajanahary ho an'ny faritra Nagorno Karabakh,” tao anatin'ny volana iray hoy ny tatitry ny Eurasianet. Ny entona ho an'i Karabakh dia vatsiana mandalo an'i Armenia, saingy ankehitriny, ny fantsona dia miampita amin'ny faritra iray ambany fifehezan'i Azerbaijàna, izay azony indray nandritra ilay ady faharoa. Ny 8 Martsa no nisy ny tatitra momba ny fahatapatapahana voalohany, ary na voalaza fa tafaverina aza izany ny 9 Martsa, dia tapaka indray ny famatsiana tamin'ny 21 Martsa. Fikorontanana nateraky ny fahasimbàn'ny fantsona iray fitaterana entona mamatsy an'i Karabakh tamin'ny 5 Martsa. “Ampy tsara ny antony anananay hieritreretana hoe nandritra ny fanamboarana ireo fantsona mpitondra entona, ora vitsy lasa izay, dia nametahan-dry zareo ao Azerbaijàna fanidy (vanne) nanapaka ny famatsiana entona” hoy ny governemanta de facto ao Karabakh tao anaty fanambaràna iray araka ny tatitry ny Eurasianet. Nolavin'ny ao Baku ireo fiampangàna. Tao anaty fanambaràna iray nivoaka tamin'ny 25 Martsa, nilaza ny Ministeran'ny Raharaha Ivelany ao Azerbaijana fa “ninian'i Armenia nampiasaina ho toy ny fitaovana fandrebirebena pôlitika ilay raharaha,” tamin'ny flazana fa vokatry ny toetrandro mangatsiaka sy ny olana ara-teknika ireo olan'ny famatsiana entona.
Ny 26 Martsa, tao anaty fanambaràna iray, niantso an'i Armenia sy Azerbaijàna ny Minisitry ny Raharaha Ivelany ao Rosia mba samy haneho fifehezantena. Ilay fanambaràna dia manondro ihany koa ny taratasy fampitambaovaon'ny Minisiteran'ny Fiarovana Rosiàna (MoD), tamin'ny 26 Martsa 2022, ka tao anatin'izany ny MoD no nilaza hoe: “nitsofoka tamin'ny faritra ambany fiadidian'ny Rosiàna mpampandry tany mamita iraka ao Nagorno-Karabakh ny tafik'i Azerbaijana ary nanao fanafihana in’efatra tao Nagorno-Karabakh, nampiasa drone Bayraktar TB2, tany akaikin'ny vohitr'i Furukh,” niampangany an'i Azerbaijana ho nanitsakitsaka ny fifanarahana ho fampitsaharana poabasy nosoniavina tamin'ny 10 Novambra .
Tao anatin'ny valinteniny, nilaza ny Ministeran'ny Fiarovana ao Azerbaijana fa an'ny ankilany fotsiny ilay fanambaràna, tamin'ny fampahatsiahivana ny tokim-panompoana ôfisialy nataon'i Baku manoloana ilay fanambarana niraisana vita sonia tamin'ny 10 Nov 2020.
Naneho ny alahelony ny #MoD ao amin'ny Repoblikan'i #Azerbaijana manoloana lay fanambarana samirery nataon'ny MoD #FederasiônaRosiàna tamin'ny 26 Martsa 2022, izay tsy maneho velively ny tena zavamisy. pic.twitter.com/xtsWHfvb50
Ny 27 Martsa, nolazain‘ny minisitry ny fiarovana rosiàna fa nesorin'i Azerbaijàna ny miaramilany tao Farrukh, izay vetivety dia nolavin'ny Ministeran'ny Fiarovana ao Azerbaijàna, tamin'ny fanamafisany fa tsy niova tamin'ny toerany ireo tafika. “Marihanay amin'alahelo fa tsy marina ny fanambaràna nataon'ny ministeran'ny fiarovana rosiàna tamin'ny 27 Martsa. Tsy niova tamin'ny nisy azy ireo tafika mitam-piadiana Azerbaijaney ao amin'ny vohitr'i Farrukh sy ireo havoana akaiky azy, izay tafiditra tanteraka ho iray tsy mivaky amin'ny firenenay,” hoy ny fanambaràna navoakan'ny MoD ao Azerbaijana.
#VAOVAO MAFANA Ampangain'i Rosia i Azerbaijana ho nanitsakitsaka ny fifanarahana fampitsaharana poabasy ao Karabakh pic.twitter.com/6bk4cJuC9B
Tao anaty fanambaràna iray nivoaka tamin'ny Alatsinainy 28 Martsa, nilaza ny Ministeran'ny Raharaha Ivelany ao Armenia fa antenainy ny andian-tafika rosiàna mpampandry tany mba hanao dingana azo tsapain-tànana hampitsaharana sy hiantohana ny fiverenan'ireo tafika ao Baku amin'ny toerany tany aloha, hoy ny tatitry ny TASS, masoivohom-baovao an'ny fanjakàna rosiàna.
Ity no fanindroany niampangan‘i Rosia an'i Azebaijàna ho nanitsakitsaka ny fampitsaharana poabasy ao Karabakh, hatramin'ny nanaovana ilay fifanekena tamin'ny Novambra 2020.
Nandritra io fotoana io, araka ny lazain'ny APA, masoivohom-baovaon'ny fanjakàna, nilaza ny AzeriGaz fa hamerina ny famatsiana entona voajanahary ho an'ny faritra ara-toekarena ao Karabakh hatramin'ny 29 Martsa. Ny sampana mampiasa ny fiteny Armeniàna ao amin'ny Radio Liberty dia nanamafy fa tafaverina tamin'ny 29 Martsa ny famatsiana entona ho an'i Khankendi [Stepanakert amin'ny fiteny armeniàna].
Mongolia 17 ora izay